Ny ankamaroan'ny fanapaha-kevitra amin'ny fividianana amin'ny B2B dia mitranga alohan'ny hifandraisany amin'ny orinasanao | Martech Zone
Ny ankamaroan'ny fanapaha-kevitra amin'ny fividianana amin'ny B2B dia mitranga alohan'ny hifandraisany amin'ny orinasanao
Talata, Oktobra 7, 2014 Alahady Oktobra 5, 2014 Douglas Karr
Amin'ny fotoana ifandraisan'ny orinasa hafa ny orinasanao hividianana ny vokatrao na serivisinao dia efa izy ireo roa ampahatelon'ny hatramin'ny 90 isan-jaton'ny lalan'ny fividianana dia. Ny antsasaky ny mpividy B2B rehetra dia manomboka ny fisafidianana ny mpivarotra manaraka amin'ny alàlan'ny fanaovana fikarohana tsy ara-potoana momba ny fanamby eo amin'ny orinasa mifandraika amin'ny olana iray tadiavin'izy ireo.
Izany no zava-misy eto amin'ity tontolo iainantsika ity! Ny mpividy B2B dia tsy manam-paharetana na fotoana hiandrasana ny solontenan'ny mpivarotra any ivelany hampahafantatra azy ireo ny vokatrao na serivisinao. Efa fantatr'izy ireo ny olana ary efa mikaroka ny vahaolana izy ireo. Ny ekipanao dia tokony hamokatra atiny manohana sy manangana fahefana amin'ny haino aman-jery sosialy sy ny valin'ny karoka mba hahafahanao misambotra azy ireo mialoha amin'ny dingana fikarohana. au
B2B Sales dia mety ho henjana, ary raha toa ianao ka be ny orinasa any, dia mihodinkodina ny kodiaranao manandrana manangona ny varotra miaraka amina paikady ivelany mahazatra toy ny antso mangatsiaka, ny varotra ary ny mailaka mivantana. Ity infographic, Niova ny varotra B2B, dia hasehoko anao ny antony manolo haingana ny varotra ivelany sy ny paikadim-barotra amin'ny fomba anatiny ny mpivarotra marani-tsaina. Mila mamorona fitarihana bebe kokoa ianao ary amin'ny farany dia hahazo vola bebe kokoa, ary ity infographic ity dia hanondro anao amin'ireo fitaovana afaka mamerina anao amin'ny làlana tsara. Avy amin'ny Maximize Social Media.
Ny olona sasany dia te-hiditra anaty ho solon'ny marketing ivelany. Tsy mino aho fa fampitahana mety izany. Raha ny marina dia mino aho fa ny fitambaran'ny ezaka miditra sy ivelany dia mampitombo ny fahafahanao mihidy tsara kokoa. Ny atiny dia manana lalan-tsakafo lehibe ihany koa - ny infographic na whitepaper dia afaka mitondra fitarihana mandritra ny taona maro, ahafahan'ny ekipa mpivarotra ivelany mifantoka amin'ny fananganana ny fifandraisana sy ny fanakatonana ny varotra fa tsy ny fampahafantarana fotsiny ilay vinavina.
Tags: dia ny mpividy b2bb2b marketingfanapahan-kevitra momba ny fividianana b2bfikarohana b2bvarotra b2bdia ny mpividylevitra fanapahan-kevitra
Tsy ianao irery no mitolona amin'ny Analytics
Chirpify: ampio fiovam-po amin'ny fanaraha-maso ny media sosialinao